Iyi dandemutande analytics package iri kukurumidza kuve iyo yakanaka kwazvo pasuru yandakaona - kunyanya kune mabloggi uye vaparidzi vewebhu. Iyo dhibhodhi yakamboshoropodza metric inobatsira - ese kubva kune imwechete peji.
Jul 21, 2007 na9:17 PM
wanga uchitevera zvirevo zveblog yavo positi nezvazvo Doug? .. vamwe havasi kufara nazvo… vakagadzirirwa kutandara masikati eMugovera vachiverenga LOL
Jul 21, 2007 na9:31 PM
Ndine, Steve. Handina kuvhunduka hangu. SeMutariri weChigadzirwa, ini ndinoona kuita uku nguva dzese patinenge 'tichivandudza' chigadzirwa kana kuburitsa chinhu chitsva. Chokwadi ndechekuti, vanhu havadi shanduko. Kunyangwe zvichifambira mberi.
Heino chinyorwa chinonakidza: shanduko hadzina kubvisa ani functionality! Zvakangowedzera zvimwe!
Jul 23, 2007 na3:18 PM
Ndakatanga kushandisa Clicky mavhiki apfuura, uye ndinofara nazvo!
Zviri nani pane Google Analytics 🙂
Pane mumwe munhu akaona data rakasiyana richidzoserwa naClicky vs. Google Analytics padivi nedivi kuyedzwa? Tine webhusaiti yemutengi payakaiswa Clicky nguva pfupi yadarika uye iri kuratidza data rakatosiyana neGoogle. Semuenzaniso, rimwe zuva Google yakaratidza 18 vashanyi vakasiyana, uye Clicky akaratidza makumi mana nemasere pazuva rimwe chete, uye ichi hachisi chiitiko chenguva imwe chete. Sezvo zvakanyanya mukana wekuti imwe analytics pasuru yaisazotaura data pane kuti imwe yaizogadzira data rekunyepedzera, ndinofanira kufunga kuti Clicky ine data chaiyo asi handikwanise kufunga kuti sei musiyano uripo.
Josh, zvakadini nedzimwe nhamba, dzakadai seshanyo nezviito, idzo dzinoenderana pedyo here? Vashanyi vedu vakasiyana vanoverengerwa neIP kero izvozvi. Kunyange zvichikwanisika kuita kuti ive yakanyatsojeka nemakuki uye zvisizvo, sezvinoita mamwe maapplication, hapana nzira yechokwadi yekuiwana 100% chaiyo. (Vamwe vashandisi vanodzima makuki, nezvimwewo).
Ndinotenda mumhando yechigadzirwa changu, asi kana paine chandinobheja kuti nhamba dzeGoogle dzakakwana kupfuura dzedu. Vane makumi ezviuru zvemaseva anomhanyisa Analytics, akagoverwa pasirese. Nepo isu tichingori kambani diki ine maseva angangoita gumi, ese ari munzvimbo imwechete mukati meUS. Zvakaoma kukwikwidzana nazvo, pasina mabhiriyoni mubhangi.